စီပူအာနိုဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
စီပူအာနိုဘာသာစကား ( /sɛˈbwɑːnoʊ/ ), Bisaya / Binisaya အဖြစ်လည်း လူသိများပြီး၊ ၎င်းကိုအများစုကအသိအမှတ်ပြုထားသည်။  (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်: "Visayan" အခြားနဲ့အတူရောထွေးခံရဖို့မ Visayan ဘာသာစကားများ ), ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းတွင်ပြောဆိုသော ဩစတြေးလျ ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး၊ ဗဟို Visayas ၊ အရှေ့ Visayas အနောက်ပိုင်းနှင့် Mindanao အများစု တွင် ပြောဆိုသည်။ အဆိုပါဘာသာစကား၏ကျွန်းကနေမူလ စီဘူ နှင့်အမျိုးမျိုးသောနေဖြင့်အဓိကအားပြောပြီဖြစ်ပါတယ် Visayan ethnolinguistic အုပ်စုများ အဲဒီဒေသတွေ, အဓိကအားဖြင့်မှဇာတိနေသော Cebuano ။  ဖိလစ်ပိုင် (တ ဂါးလော့ဂ် ) သည်ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားပြောသူအများဆုံးရှိသော်လည်း Cebuano သည်ဖိလစ်ပိုင်တွင် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအထိအများဆုံးမိခင်ဘာသာစကားပြောသောလူဦးရေရှိခဲ့သည်။  ၎င်းသည် ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကား ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Visayan ဘာသာစကားများကို အများဆုံးပြောဆိုကြပြီးဖြစ်သည်။
16 million (2005)e22
စီပူအာနိုဘာသာစကားတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် စကားစုအချို့မှာ - 
နေကောင်းလား? (နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်) - ကုမူဆတာ? Kumusta ?
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း - မာယောင်ဘွန်တဂ် Maayong buntag
မင်္ဂလာနေ့လယ်ခင်း - မာယောင်ဟပွန် Maayong hapon
ကောင်းသောညနေခင်း - မာယောင်ဂါဘီး Maayong gabii
နှုတ်ဆက်ပါတယ် - အာ့ယို - အာ့ယို Ayo-ayo ("ဂရုစိုက်ပါ၊ တရားဝင်"), Adios (ရှားပါး)၊ Babay (အလွတ်သဘော၊ "Goodbye" ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှု), Amping ("Take care"), Hangtud sa sunod nga higayon ("Until") နောက်တစ်ကြိမ်")
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!; သို့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - ဒက်ဂဟင်ဆလာမတ် Daghang Salamat
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ဆလာမတ် Salamat
ကြိုဆိုပါတယ် - Wala'y sapayan
မဟုတ်ဘူး ( အရေးကြီးသော ) - အာ့ယော် Ayaw
မသိဘူး - အမ် ဘောတ် Ambot
ဟုတ်ပါတယ် အိုအိုး Oo
ဖြစ်နိုင်တယ် - တင်္ဂါလီ၊ ဘဆိန် Tingali, Basin
ဘယ်သူလဲ - ကိန်ဆာ Kinsa
ဘာလဲ - အွန်ဆာ Unsa
ဘယ်မှလဲာ - အဆာ Asa
ဘယ်အချိန်လဲ - ကာနုစ-အာ Kanus-a
ဘယ်လိုလဲ - ဂီအွန်ဆာ Giunsa
စီပူအာနို အဘိဓာန်အွန်လိုင်း \_ t
ဂျွန် U. Wolff, Cebuano- Visayan ၏ A အဘိဓာန်: Volume ကိုငါ, Volume ကို II ကို, ရှာဖွေ interface ကို, Project မှဂူတင်ဘာ့ဂ်မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်စာသားကို
Lagda Sa Espeling စာလုံးပေါင်းစနစ် (Cebuano)
ဘာသာစကား Links.org - ဖိလစ်ပိုင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘာသာစကားများ - စီပူအာနို သင်ခန်းစာ
Language Links.org - ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်ကမ္ဘာ
၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင်ဖရန့်ထုတ်ဝေသော စပိန် - စီပူအာနို အဘိဓာန် အွန်လိုင်းစာအုပ် Felix Guillén
စီပူအာနို ဘာသာစကားဖြင့် အွန်လိုင်းသမ္မာကျမ်းစာ ၊ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များ၊ စာပေများနှင့်အခြား သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ 
↑ Definition of Cebuan (in en)။
↑ Definition of Cebuano (in en)။
↑ Definition of Cebu (in en)။
↑ Cebu (province)။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Cebuano"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Cebuano (in en)။
↑ Ammon၊ Ulrich (2006)။ Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Volume 3။ Walter de Gruyter။ p. 2018။ ISBN 9783110184181။
↑ Useful Cebuano phrases။ Omniglot။ 25 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wala / Dili။ Learn Cebuano: Cebuano-Visayan Language Lessons။ 18 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Philippine English: Linguistic and Literary။ Hong Kong University Press။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီပူအာနိုဘာသာစကား&oldid=517581" မှ ရယူရန်
၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။